व्यवहारिक विज्ञापन बनाम प्रासंगिक विज्ञापन: के फरक छ? | Martech Zone
डिजिटल विज्ञापन कहिलेकाहीं संलग्न खर्चको लागि नराम्रो र्याप हुन्छ, तर त्यहाँ कुनै इन्कार छैन, जब सही तरिकाले गरिन्छ, यसले शक्तिशाली परिणाम ल्याउन सक्छ।
कुरा यो हो कि डिजिटल विज्ञापनले कुनै पनि प्रकारको अर्गानिक मार्केटिङ भन्दा धेरै फराकिलो पहुँचलाई सक्षम बनाउँछ, त्यसैले मार्केटरहरू यसमा खर्च गर्न इच्छुक छन्। डिजिटल विज्ञापनहरूको सफलता, स्वाभाविक रूपमा, तिनीहरू लक्षित दर्शकहरूको आवश्यकता र चाहनासँग कत्तिको राम्ररी पङ्क्तिबद्ध छन् भन्नेमा निर्भर गर्दछ।
मार्केटरहरू सामान्यतया यो पूरा गर्न दुई प्रकारका विज्ञापनहरूमा निर्भर हुन्छन् - प्रासंगिक विज्ञापन र व्यवहार विज्ञापन।
व्यवहार र प्रासंगिक विज्ञापन पछाडिको अर्थ
व्यवहारिक विज्ञापनले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको विगतको ब्राउजिङ व्यवहारको बारेमा जानकारीको आधारमा विज्ञापनहरू प्रस्तुत गर्ने समावेश गर्दछ। यो वेबसाइटमा बिताएको समय, गरिएका क्लिकहरूको संख्या, साइट भ्रमण गर्दा, र यस्तै अन्य मापदण्डहरूमा सङ्कलन गरिएको डेटा प्रयोग गरेर हुन्छ।
यस डेटालाई त्यसपछि विभिन्न विशेषताहरू भएका धेरै प्रयोगकर्ता व्यक्तिहरू निर्माण गर्न प्रयोग गरिन्छ जसलाई सान्दर्भिक विज्ञापनहरू लक्षित गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईंले उत्पादनहरू A र B लाई लिङ्क गर्नुभयो भने, A मा रुचि राख्ने तपाईंको लक्षित दर्शकहरू B सँग संलग्न हुनेछन्।
अर्कोतर्फ, प्रासंगिक विज्ञापन ती पृष्ठहरूको सामग्रीमा आधारित पृष्ठहरूमा विज्ञापनहरू राख्नु समावेश छ। यो सान्दर्भिक लक्ष्यीकरण भनेर चिनिने प्रक्रियाको प्रयोग गरेर हुन्छ, जसमा उपयुक्त शीर्षक वा किवर्डहरूमा आधारित विज्ञापनहरू विभाजन हुन्छ।
उदाहरणका लागि, पुस्तकहरूको बारेमा कुरा गर्ने वेब पृष्ठले चश्मा पढ्नको लागि विज्ञापन देखाउन सक्छ। वा नि:शुल्क कसरत भिडियोहरू, दिनचर्या, र रेसिपीहरू प्रकाशित गर्ने वेबसाइटले यसको कसरतसँगै कुकवेयरका लागि विज्ञापनहरू चलाउन सक्छ — कसरी फिटनेस ब्लेंडर गर्दछ।
प्रासंगिक विज्ञापनले कसरी काम गर्छ?
प्रासंगिक विज्ञापनदाताहरूले सान्दर्भिक पृष्ठहरूमा आफ्ना विज्ञापनहरू राख्न माग-साइड प्लेटफर्मको प्रयोग गर्छन्।
प्यारामिटरहरू सेट गर्नु पहिलो चरण हो। जबकि विषयहरू सामान्य कोटीहरू हुन् जुन विज्ञापनमा फिट हुन्छ (जस्तै फेसन, राजनीति, खाना पकाउने, वा फिटनेस), कीवर्डहरूले ती विषयहरूमा थप सटीक लक्ष्यीकरण सक्षम गर्दछ। धेरै जसो विज्ञापनहरूको लागि, एक विशेष विषय र त्यस विषयको लागि लगभग 5-50 कीवर्डहरू छनौट गर्न पर्याप्त हुनुपर्छ।
त्यसपछि, Google (वा जुनसुकै खोज इन्जिन प्रयोग भइरहेको छ) ले आफ्नो नेटवर्कमा रहेका पृष्ठहरूलाई सबैभन्दा सान्दर्भिक सामग्रीसँग विज्ञापन मिलाउन विश्लेषण गर्नेछ। विज्ञापनदाताले चयन गरेको कुञ्जी शब्दहरूको अतिरिक्त, खोज इन्जिनले भाषा, पाठ, पृष्ठ संरचना, र लिङ्क संरचना जस्ता चीजहरूलाई खातामा लिनेछ।
विज्ञापनदाताको पहुँच कति विशिष्ट होस् भन्ने कुरामा निर्भर गर्दै, खोज इन्जिनले दिइएको कुञ्जी शब्दहरूसँग मेल खाने पृष्ठहरूलाई मात्र विचार गर्न सक्छ। एक पटक विश्लेषण पूरा भएपछि, विज्ञापन खोज इन्जिनको पृष्ठमा राखिनेछ जुन सबैभन्दा सान्दर्भिक मानिन्छ।
व्यवहारिक विज्ञापनले कसरी काम गर्छ?
व्यवहारिक विज्ञापन प्रयोगकर्ताहरूको विगतको व्यवहारमा निर्भर हुने भएकोले, विज्ञापनदाताहरूले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा त्यो व्यवहार ट्र्याक गर्नु हो। तिनीहरूले कुकीहरू मार्फत त्यसो गर्छन्, जुन तिनीहरूले प्रयोगकर्ताको हार्ड ड्राइभमा सम्मिलित गर्छन् जब कसैले ब्रान्ड वेबसाइटमा जान्छ (र कुकीहरू स्वीकार गर्न अप्ट इन गर्दछ)।
कुकीहरूले उनीहरूलाई प्रयोगकर्ताले कहाँ ब्राउज गर्दै छन्, कुन खोज परिणामहरूमा क्लिक गरिरहेछन्, उनीहरूले ब्रान्डको वेबसाइटमा कति पटक भ्रमण गरिरहेका छन्, कुन उत्पादनहरू उनीहरूले इच्छा सूचीमा राखेका छन् वा कार्टमा थपिरहेका छन्, र यस्तै अन्य कुराहरू हेर्न मद्दत गर्दछ।
नतिजाको रूपमा, तिनीहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गर्न सक्छन् कि तिनीहरू पहिलो पटक वेबसाइटमा छन् वा खरिदकर्ताहरू दोहोर्याउँछन्। विज्ञापनदाताहरूले स्थानीय रूपमा सान्दर्भिक विज्ञापनहरू भएका प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गर्न भौगोलिक स्थान र IP ठेगाना प्यारामिटरहरू ट्र्याक गर्न कुकीहरू पनि प्रयोग गर्छन्।
व्यवहार ट्र्याकिङको नतिजाको रूपमा, प्रयोगकर्ताहरूले गत हप्ता ब्राउज गरेको ब्रान्डका विज्ञापनहरू हेर्न सक्छन् जब अनलाइन समाचार पढ्दा वा पूर्ण रूपमा फरक कुराको लागि ब्राउजिङ गर्दा। उनीहरूको विगतको रुचि वा स्थानीय रूपमा सान्दर्भिक पदोन्नतिले उनीहरूलाई क्लिक गर्न प्रेरित गर्छ।
व्यवसायहरूलाई प्रयोगकर्ताको व्यवहारको ट्र्याक राख्न र तदनुसार विज्ञापनहरूको साथ लक्षित गर्न मद्दत गर्न धेरै उपकरणहरू उपलब्ध छन्।
कुन राम्रो छ: प्रासंगिक वा व्यवहार?
दुई प्रकारका विज्ञापनहरूलाई भ्रमित गर्न सजिलो छ, किनकि तिनीहरू दुवैले प्रयोगकर्ताको रुचिमा आधारित विज्ञापनहरू देखाउँछन्। यद्यपि, तिनीहरू एकदम फरक छन्। सान्दर्भिक विज्ञापनले प्रयोगकर्ताले ब्राउज गरिरहेको वातावरणमा आधारित काम गर्दा — वेबसाइट सामग्रीको प्रकृति, अर्को शब्दमा — व्यवहारसम्बन्धी विज्ञापनले प्रयोगकर्ताले वेबसाइटमा पुग्नुअघि लिएका कार्यहरूमा निर्भर गर्दछ, जस्तै तिनीहरूले भ्रमण गरेको उत्पादन पृष्ठ।
धेरैले व्यवहारिक विज्ञापनलाई दुई मध्ये बढी उपयोगी मान्छन्, किनकि यसले वेबसाइटसँग सम्बन्धित सामग्री फ्ल्यासिङ गर्नुको सट्टा उनीहरूको वास्तविक व्यवहारमा आधारित प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गरेर गहिरो निजीकरण सक्षम बनाउँछ। यद्यपि, त्यहाँ धेरै अद्वितीय फाइदाहरू छन् प्रासंगिक विज्ञापन जुन ध्यान दिन लायक छ।
कार्यान्वयनको सहजता - व्यवहारिक विज्ञापनको मुख्य फाइदा यसले प्रदान गर्ने निजीकरणको स्तरमा निहित छ। यद्यपि, यसका लागि आह्वान गरिएको छ विस्तृत ग्राहक डेटा र सही उपकरण विश्लेषण गर्न यो, जुन कम स्रोतहरू भएका व्यवसायहरूको लागि किफायती नहुन सक्छ। प्रासंगिक विज्ञापन सुरु गर्न धेरै सजिलो र कम महँगो छ र साइट आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्न एक उत्कृष्ट तरिका हुन पर्याप्त प्रासंगिकता प्रदान गर्दछ। यसो भन्दै, कम्पनीहरूले वेबसाइट आगन्तुकहरूलाई थप व्यक्तिगत विज्ञापन अनुभव प्रदान गर्न तेस्रो-पक्ष कुकीहरूमा धेरै भरोसा गर्छन्। यद्यपि, प्रयोगकर्ताहरूबाट सङ्कलन र प्रयोग गर्न सकिने डाटा (GDPR) मा बढ्दो नियमहरूसँग, कम्पनीहरूलाई उनीहरूको प्रासंगिक विज्ञापन अभियानहरू प्रबन्ध गर्न थप उन्नत उपकरणहरू र सफ्टवेयर चाहिन्छ किनभने त्यहाँ थप एक चरण समावेश छ, अर्थात्, अनुमति माग्न। प्रयोगकर्ता आफ्नो डाटा सङ्कलन गर्न। तसर्थ, यदि तपाइँ तपाइँको मार्केटिङ टीम मा विज्ञापन मा नयाँ परिवर्तनहरु को बारे मा छिटो डिजिटल ग्रहण र उच्च स्तर को समझ को प्रोत्साहित गर्न चाहानुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा, अन्तरक्रियात्मक वाकथ्रुहरु लाई तपाइँको विज्ञापन सफ्टवेयर संग तिनीहरूलाई तालिम दिने तरिका को रूप मा एकीकृत गर्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि, तपाईंले EU मा विज्ञापन अभियान सेटअप गर्नका लागि आफ्ना विज्ञापनदाताहरूलाई रिमाइन्डरहरूलाई प्रोत्साहित गर्न वाकथ्रु निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले अभियान सेट गर्दा सबै आधारहरू ढाक्न र सबै नियमहरू राम्ररी पालना गर्नको लागि अन्तिम-प्रयोगकर्तालाई काट्ने आकारको जानकारी दिनको लागि चेकलिस्ट वा माइक्रोलर्निङ मोड्युल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसले हामीलाई दोस्रो बिन्दुमा ल्याउँछ।
गोपनीयता - निजी प्रयोगकर्ता जानकारीको दुरुपयोगको लागि दण्ड ठूलो हुन सक्छ। यसबाहेक, कुकीहरू अब वेबसाइटमा स्वचालित छैनन्, र प्रयोगकर्ताहरूले स्वैच्छिक रूपमा तिनीहरूको लागि अप्ट-इन गर्न आवश्यक छ, पुन: लक्ष्यीकरणलाई अझ गाह्रो बनाउँदै। तपाईले देख्नुहुन्छ, प्रयोगकर्ताहरूले छनोट, पारदर्शिता, र तिनीहरूको डेटा कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने नियन्त्रण सहित थप गोपनीयताको माग गर्छन्। स्वाभाविक रूपमा, वेब इकोसिस्टमले उनीहरूको बढ्दो मागहरूसँग मेल खानुपर्छ। जबकि सफारी र फायरफक्सले तेस्रो-पक्ष कुकीलाई चरणबद्ध गरिसकेका छन्, गुगलले त्यसो गर्नेछ दुई वर्ष भन्दा बढी। तर सान्दर्भिक विज्ञापनले कुकीहरूमा भर नपर्ने हुनाले, तपाईंका विज्ञापनदाताहरूले आफ्ना विज्ञापनहरू प्रदर्शन गर्दा पालना नगर्ने चिन्ता लिनु पर्दैन।
ब्रान्ड प्रतिष्ठा संरक्षण - सुरक्षाको एउटा पक्ष निस्सन्देह कानूनी अनुपालन हो। जे होस्, प्रतिष्ठालाई जोगाउनको लागि झन्झटिलो कुरा हुन सक्छ, विशेष गरी जब विज्ञापनदाताहरूले आफ्ना विज्ञापनहरू देखाउने ठाउँलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्। प्रायः, ब्रान्डहरूले प्रतिक्रियाको सामना गर्नु परेको छ किनभने तिनीहरूका विज्ञापनहरू वयस्क साइटहरूमा वा चरमपन्थी दृश्यहरू भएकाहरूमा फ्ल्यास गरिएका थिए। यो, तथापि, प्रयोगकर्ता व्यवहार को एक परिणाम थियो। यसको विपरित, सान्दर्भिक विज्ञापनले वेब पृष्ठलाई चीजहरूको केन्द्रमा राख्छ, र ब्रान्डले विज्ञापनसँग सम्बन्धित विषयहरू, उप-विषयहरू र कीवर्डहरू निर्दिष्ट गरेर वेब पृष्ठमा नियन्त्रण गर्दछ।
ठूलो सान्दर्भिकता - व्यवहारिक विज्ञापनको आधारभूत धारणा भनेको प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको ब्राउजिङ व्यवहारमा सामान्य प्रवृत्तिहरूसँग सम्बन्धित विज्ञापनहरू हेर्न चाहन्छन्। यद्यपि, यो राम्रोसँग हुन सक्छ कि तिनीहरूको वर्तमान चाहनाहरू ती प्रवृत्तिहरूसँग नपर्छन्। उदाहरणका लागि, खेलकुद उपकरणहरू ब्राउज गर्ने व्यक्तिले ग्राफिक डिजाइन सेवाहरूको बारेमा पहिले नै ब्राउज गरेको भए पनि, ग्राफिक डिजाइन सेवाहरूको बारेमा विज्ञापनहरू हेर्न चाहँदैनन्। यसको विपरित, अर्गानिक प्रोटीन पाउडरहरूको लागि विज्ञापन तिनीहरूको हालको मनस्थितिसँग बढी सान्दर्भिक हुन सक्छ र थप क्लिकहरू आकर्षित गर्न सक्छ।
ब्यानर अन्धापनको कुनै जोखिम छैन - यो एक सामान्य घटना हो जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले अवचेतन रूपमा विज्ञापनहरूलाई बेवास्ता गर्न सिकेका छन्। उदाहरणका लागि, चलचित्र समीक्षा प्लेटफर्मको लागि विज्ञापनहरू चलाउने चलचित्र टिकट बुकिङ साइटले कुकवेयरसँग सम्बन्धित विज्ञापनहरू सेवा गर्नुभन्दा बढी अर्थ राख्छ।
कम ज्ञात ब्रान्डका प्रासंगिक रूपमा सान्दर्भिक विज्ञापनहरू प्रसिद्ध ब्रान्डका विज्ञापनहरूको तुलनामा मानिसहरूले 82% बढी सम्झाउँछन् तर पृष्ठ सामग्रीमा अप्रासंगिक छन्।
थप रूपमा, धेरै व्यक्तिहरू उनीहरूको विगतको ब्राउजिङ गतिविधिमा आधारित फ्ल्यास विज्ञापनहरूसँग असहज हुन्छन्। त्यहाँ ठूला कम्पनीहरू द्वारा सर्वेक्षण गरिएको सामान्य अर्थ छ जसले मानिसहरूलाई विज्ञापनमा क्लिक गर्नबाट रोक्न सक्छ यदि विज्ञापन आफैं सान्दर्भिक हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, सान्दर्भिक विज्ञापनले विज्ञापनलाई वेब पृष्ठमा फिट गर्छ, यसले यसलाई कम 'स्टकर-जस्तै' र क्लिक गर्नको लागि बढी भरपर्दो देखिन्छ। जब प्रयोगकर्ताहरूले सान्दर्भिक विज्ञापनहरू देख्छन्, विज्ञापन दृश्यता बढ्छ, र उच्च क्लिक-थ्रु दरको सम्भावना बढ्छ।
प्रासंगिक लक्ष्यीकरण औसत प्रदर्शन मा 73% वृद्धि व्यवहार लक्ष्यीकरण संग तुलना गर्दा।
अमेरिकी मार्केटरहरूको% 49% प्रासंगिक लक्ष्यीकरण प्रयोग गर्नुहोस् आज।
31% ब्रान्डहरू योजना बनाउँछन् प्रासंगिक विज्ञापनमा आफ्नो खर्च बढाउनुहोस् आउने साल।
यो सबै "सन्दर्भ" को बारे मा छ
निष्कर्षमा, डिजिटल मार्केटिङ रणनीतिमा खेल्नको लागि दुवैको फरक भूमिका हुन्छ, र विभिन्न ब्रान्डहरूले तिनीहरूलाई फरक-फरक वजन तोक्न सक्छन्।
तर त्यहाँ समयहरू छन् जब प्रासंगिक विज्ञापन एक राम्रो विकल्प हो। यसले ब्रान्डहरूलाई एउटा अभियान सुरु गर्न मद्दत गर्दछ जसलाई सही कार्यान्वयनको लागि धेरै स्रोतहरू आवश्यक पर्दैन। यसले उनीहरूलाई व्यक्तिगत प्रयोगकर्ता डेटा प्रयोग गर्नुपर्दैन वा GDPR पालना गर्ने चिन्ता लिनुपर्दैन भन्ने पनि सुनिश्चित गर्दछ। तिनीहरू केवल यसको सट्टा कीवर्ड लक्ष्यीकरणको लागि जान सक्छन्।
अन्ततः, के महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ तपाइँका विज्ञापनहरू के पूरा गर्न चाहनुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरु लाई तपाइँको ब्रान्ड को बारे मा कस्तो महसुस गराउन चाहानुहुन्छ, र तपाइँ त्यस प्रभाव को लागी कति खर्च गर्न को लागी इच्छुक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। त्यसपछि, आफ्नो छनोट गर्नुहोस् - परिणामहरू समयसँगै भुक्तान हुनेछ।
टैग: विज्ञापन कोटिविज्ञापन कुकीविज्ञापन कीवर्डहरूविज्ञापन गोपनीयताविज्ञापन सान्दर्भिकताadpushupविज्ञापन विभाजनब्यानर अन्धाव्यवहार विज्ञापनब्रान्ड प्रतिष्ठाइतिहास ब्राउज गर्नुहोस्सन्दर्भप्रासंगिक विज्ञापनहरूप्रासंगिक विज्ञापनप्रासंगिक विज्ञापन लाभहरूप्रासंगिक विज्ञापन तथ्याङ्कफिटनेस ब्लेंडरGDPRभौगोलिक स्थान विज्ञापनहरूGoogle प्रासंगिक विज्ञापनहरूगुगल प्रदर्शन विज्ञापनआईपी ​​ठेगाना विज्ञापनहरूस्थानीय विज्ञापनविज्ञापन खोज्नुहोस्
रोनाल्ड गेब्रियल सहायक सम्पादक हुन् वाणिज्य सल्लाहकारहरू। उहाँसँग ईकमर्स, रिटेल, मार्केटिङ, र टेक्नोलोजीको बारेमा लेखनमा 8 वर्ष भन्दा बढी अनुभव छ। उहाँ एक नम्बर केटा पनि हुनुहुन्छ जसले आफ्नो क्रसवर्ड र सुडोकुको मजा लिन्छ। सम्पादन वा लेख नगर्दा, उनी एनिमेसको पुन: रनहरू हेर्दै र आफ्नै केही क्यारेक्टरहरू स्केच गर्दै भेट्टाउन सकिन्छ।
स्पष्टता: वेबसाइट अप्टिमाइजेसनको लागि नि: शुल्क हीटम्याप र सत्र रेकर्डिङहरू
Plezi One: तपाईंको B2B वेबसाइटको साथ लीडहरू उत्पन्न गर्न नि: शुल्क उपकरण